Blaogy Amerika Latina Tsara Indrindra: The Cooking Diva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 4:52 GMT
(Fanamarihana: tamin'ny marsa 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Hita indraindray fa ny fisehoan-javatra tokana mihanaka haingana kokoa noho ny fiparitahan'ny weblogs tenany dia ny lanonana fanomezan-doka ambaran'ny tena izay mankasitraka ny fampielezany sy ny herin'ny kolontsaina tsy mitsaha mitombo. Ao anatin'ny fikarohana rohy sy ny fankasitrahana, na izany aza, nijoro ho toy ny Loka Nobel ho an'ireo mpanoratra diary antserasera ny lanonana fankalazana, na dia mitady hitongilana any amin'ny teny Anglisy aza ny safidiny. Antsoin'ny maro mahazatra hoe “The Bloggies”, famoronan'i Nikolai Nolan, 23 taona, teratany Michigan sady mpankafy sarimiaina ny Loka Weblog faha-enina fanao isan-taona.
Araka ny Wikipedia, “Ahitana sokajy telopolo ny loka, anisan'izany ny valo isam-paritra … fito avy amin'ny lohahevitra … ary loka ho an'ny ‘Weblog ny Taona’ sy ny ‘Zava-bita tsara indrindra’.” Navoaka androany ireo mpandresy tamin'ity taona ity ary faly isika manambara fa ny Cooking Diva, weblog manokan'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, mpitarika mahavariana, sy manodidina olona mahafinaritra, Melissa De Leòn Douglass no voafantina ho “Weblog Amerikana Latina Tsara Indrindra.”
Tsy mahagaga raha mifantoka matetika amin'ny sakafo ny The Cooking Diva Blog, saingy tsy momba ny haisakafo tsotra fotsiny ny votoatin'i De Leòn Douglass. Monina ao Panama, efa nonina, niasa, sy nianatra tany Meksika, California, Thailandy sy manodidina an'i Amerika Latina izy. Matetika mahita ny làlany amin'ny asa soratra sy manintona mpamaky manerantany izany traikefa mitety izao tontolo izao izany .
Na mandinika momba ny voankazo manga, mankasitraka ny asa tanana amin'ny fanamboarana fromazy ao Ekoadaoro, na mankany ambanivohitr'i Panama mba hitady tantara fanaovana cocada, ny fomba fanorany mafampàna dia toy ny taratasy nosoratana avy amin'ny namana.
Afaka mahafantatra bebe kokoa momba an'i Melissa De Leòn Douglass ianao amin'ny famakiana ny biôgrafiany na lahatsoratra mahafinaritra momba ireo “zavatra 10 mbola tsy fantatrao mihitsy momba ahy” anisan'izany ny fankafizany voninkazo maniry ao an-trano.
Anisan'ireo tafakatra hafa tamin'ny sokajy Amerika Latina i Bestiaria, bilaogy malaza Arzantina momba ny vehivavy amin'ny teny Espaniôla, Motel de Moka, bilaogy amin'ny teny roa avy any Meksika miresaka momba ny mozika, Ponchorama, bilaogy amin'ny teny roa ihany koa no sady avy ao Meksika, ary farany, Guyana-Gyal izay nitafatafa tamin'i Georgia Popplewell ato amin'ny Global Voices.
Arahabaina i Melissa sy ireo tafakatra ary ireo voatendry rehetra tamin'ity Loka Blaogy faha-enina fanao isan-taona ity.